Wax Ka Ogoow Waxyaabaha Sababa Maskax Wareerka - Daryeel Magazine
Wax Ka Ogoow Waxyaabaha Sababa Maskax Wareerka
Waxa jira fikrado badan oo ku saabsan waxayaalaha sababa maskax wareerka. Arintani waxa ay qayb ka tahay mid waxayaabaha inaga dhiga dadka aan nahay Waxa suurto gal ah in qaarkeen ay dabiiciyyan u fududdahay in uu xanuun xagga maskaxda ahi ku dhacaa, kaas oo ka bilaaban kara dhacdooyin rafaad leh iyo jugo. Arrimaha hoos ku qoran yaa ah sababaha suuro galka ah qaarkood in ay keenaan maskax wareerka. Waxay uu xanuunka maskaxdu ku iman karaa arrimahan midkood uun ama qaarkood oo wada jira: Nolosha qoyska oo adag: Haddii ilmuhu soo koray isaga oo dareemaya in la dayriyay, ama waalidkii ka cabsada, ama la fara xumeeyo waxay dhamaan keeni karaan nabad galyo la’aan iyo khatar uu qofku ugu jiro in uu qaado xanuun maskaxeed. Cabbudhin:
Inta uu ilmuhu yar yahay waxa laga yaabaa in la ciqaabo oo la cabudhiyo waxaba laga yaabaa la ciqaabo haddii uu xanaaqno, qosolno ama uu ooyo.
Dareenada la cabbudhiyo oo aan la soo ban dhigin waxay sababi karaan cadaadis dhaawici kara caafimaadka maskaxeed iyo ka xagga jidhkaba.
Dhacdooyin nololeed ee dhibka baddan Kuwani waxay noqon karaan dhacdooyin jug wayn u gaysta qofka sida saaxiib ama qaraabo dhaw oo dhinta, ama halgan waqti dheer qaata sida haddi qofku yahay dhibbanaha dulmi ama cadaadis.
Samayska jidhka: Samayskeenu waxa uu raad ku leeyahay maskaxdeenna. Tusaale, haddii aan naxno waxan soo saarnaa dheecaan la yidhaa Adrenaline kasoo ku yimaada waxa loo yaqaanno jawaabta dagaallan ama carar “fight or flight”. Haddii dheecaanka adrenalinta aan loo isticmaalin ficil dhaqdhaqaaq ah, maskaxdeenu waxay noqotaa mid kacsan jirkeennuna mid kakan.
Hiddo sidayaasha (Genes): Kuwani waa habka ay waalidku ugu gudbiyaan carruurtooda calaamadaha muuqaalka ah. Waxa suuro gal ah in hiddaheennu ay raad ku leeyihiin shakhsiyaadkeenna. Waxa jira hiddo sidayaal sababi kara xannuunno xagga muuqaalka ah, sidaas darteed waxa jiri kara hiddo sidayaal inoo nuglayn kara xanuunno maskaxeed
Waxyaabaha Sababa Caado Wareerka Dumarka Cuntooyinka Sababa Cudurka Kansarka Ee ay Tahay Inaad Ka Fogaato Waxyaabaha Keeno Illowshaha Badan Waxyaabaha Keena Warwarka & Walaaca (Stress)